Ngo izinsuku ezimnandi zakudala lapho izinhlamvu zazisetshenziselwa ihansi Izimpaphe okuye kwadingeka ukuthi elicwiliswe inki, ukubeka isisihla iphepha kwakulula. Ezifanele gape kancane, musa shake ngokugcwele ngepeni noma nje inobudlabha silingo isandla kanye incwadi kwenzeka kunephutha. Wayegqoke blob omkhulu, othi umsebenzi kuyodingeka sitlolwe. Manje ukubhala ngepeni ngaphandle siyindlala abantu ngomdlandla, ukuze uzizwe isimo esikhathini esidlule.
Isiphethu izibaya ngokumelene kwezibaya
Ezikhathini zaseSoviet kwakukhona umthombo izibaya, okuyinto edingekayo ukuze gcwalisa inki wedwa. Discomfiture nge usula iphutha kancane njalo kodwa awazange iqedwe kuze kube sekupheleni. Isiphethu amapeni kanye ababengaphambi zabo, baqhubeka impango scribbling, ephoqa ukushintsha, futhi ubhale ukudonsa amashidi ichithekile. Manje, lapho kubusa ipeni, uyakwesula nzima ukubona. Kufanele lo mcimbi can kuphela ezimweni eziphuthumayo, isibonelo, uma kushisa sezulu ukugeleza core. Izingane azikhohlwa lokho isisihla ngoba ipeni - lokhu lula futhi liyasiza.
Isisihla e opopayi ku zesikole-akakhulumi nabahlehlayo
Ngo eziningi ezimaphakathi esizithandayo Soviet mayelana okungase kube abafundi babe iziqephu lapho umfundi siyingozi isisihla e copybook yakhe. Ukwenza umsebenzi wesikole sakho, futhi ngakho-ke kubonakala inkimbinkimbi, uhlamvu enyantisayo uyathukuthela yalokho okwenzeka isenzakalo. izingane Modern, ebuka opopayi ubudala, ngizibuza ncamashi kanje Blob futhi uvelaphi. Kunzima ngabo ukuqonda sonke indlela futhi umlando kumiswa usula, kulabo izibaya basebenzisa, musa agobhoze. Lapha kulapho, njengoba ngaso sonke isikhathi, kukhona abazali abangakwazi ecacile kuphela ukuchaza, kodwa futhi kubonisa isibonelo ingane opende, gouache noma Ifasitelana LoLwazi Lomqulu, ukudweba isisihla kanjani. Funda izinto ezintsha ezithakazelisayo xaxa, uma ulifunda ndawonye.
Ukuma sifana blob ukufiphala kapende noma inki ibala. Iningi ngokunembile achazele ingane ngakho ngezindlela eziningana, okuyinto kuyodingeka albhamu nangoyinki umdvwebo, ibhulashi kanye ipensela:
Indlela yokuqala - ne ibhulashi nopende. Kokulugcobhoza ibhulashi emanzini, bese esinabantu ezigcotshwe nge upende, kubalulekile ukuthi siphakamise phezu emakhasini albhamu bese ulinda iconsi umbala uwela eshidini. Ngaphansi amandla yesisindo sayo kuyoba ukuthola umumo esiyingqayizivele. upende Inkblot nje ukubhekana ukuthi ngisho nomntwana oneminyaka.
Eyesibili indlela - usebenzisa ipensela. Udweba kanjani isisihla ipensela? Vele, uma ungesabi, bese ubonisa lokusungula kancane, okuhlanganiswayo kulowo nalowo kithi. Ukuze wenze lokhu, nokuzala nje kuwufanele ephepheni kukhona okungalingani yobujamo olinganise emibuthanweni noma ovals. Lokhu kumele kwenziwe ngokufaka emsebenzini umcabango, ngoba Blob ngayinye ihlukile. abadwebi Abangenalwazi kungase kubonakale sengathi ziyophumelela ziyafana, kodwa kuyinto besimo ngokuphelele.
Esesithathu yokuqala indlela Umdwebo usula kuyoba: ukuqala kuyinto ukuhlobisa ngokugcwele leaf landscape noma iyiphi ukusebenza eklanyelwe bushelelezi ngendwangu ngopende. Khona-ke kulandela ibhulashi ehlanzekile elicwiliswe amanzi avamile, futhi ngaphandle ukuxubha ukubambelela kwakhe eshidini ahlotshiswe iphepha kusengaphambili. Iconsi lamanzi nakanjani kuwele ngendwangu bese ushiye uphawu ngesimo isikhala ehlasela umzimba. Lokhu kuyoba Blob. Le ndlela inikeza impendulo yombuzo othi kanjani ukudweba isisihla ngamanzi ahlanzekile. Ukusebenzisa ke njengoba umncintiswano ngokuba izenzakalo kungaba isikhathi eside captivate izingane, futhi yaziwa, kubaluleke kakhulu kakhulu.
Lokho bonke. izindawo Fiphele kalula liphendulwe funny izilo futhi jellyfish emangalisayo. Ngemva incazelo okubonakalayo ingane indlela ukudweba blob, ungakwazi ukuqhubeka kule mnandi kakhulu. Lokhu kalula kwenziwa ngokungeza izici ezimbalwa zokuqala ezifana amehlo, ikhala, umlomo. Ungakwazi ukudweba wonke umndeni kancane izilo elifanayo, noma konke ukwenza ezahlukene. Kuyinto bonke umcabango kanye fantasy. Dweba lula uma sikwenze ajabule futhi abahle. imisebenzi yokudala okunjalo ezithakazelisayo ngokuhlanganyela kanye kwenziwe izinkampani yezingane esikhulu sika, isibonelo, kunoma iyiphi iholide. Izingane enkulu ehlekisayo nomunye yobuciko yasekuqaleni.
Dweba nezingane zakho, wonke umndeni - kumnandi futhi funny.
Altai State Museum of Lore Local
UVladimir Borovikovsky: Portrait Lopukhina. Umlando sokudalwa, incazelo portrait
Adume Dresden Igalari kanye nokuqoqwa yayo
"UCarmen" - Opera legend
Russian iphethini kazwelonke. Udweba kanjani umklamo Russian
UVladimir Gazzaev - indodana nendlalifa yomqeqeshi omkhulu
LaseDnepropetrovsk ezikhangayo esiyingqayizivele
Ukuthayipha - ke .. ukuthayipha emikhakheni ehlukahlukene
Hydrangea macrophylla - ubuhle iyashintsha
The ephansi lokushisa omdala?
Nokunamathisela ngomthofu Station Lukey 702: Ukucaciswa kanye nokubuyekeza
Isikhombi ukuphulukiswa izakhiwo Aloe: nokusebenzisa izindlela
Kuphi futhi kanjani ukwandisa imisipha pectoral
Biography kanye lokusungula Karamzina N. M. Karamzin Uhlu imisebenzi
Indlela ukushintsha imephu "Aliekspress": imiyalelo enemininingwane
Cologne Chocolate Museum: incazelo kanye nezithombe
Kanjani ukuba zinde jeans - abadala nezingane